Nepalistudio » यसरी हेर्नुहोस्, सबै प्रिय लाग्नेछन् तपाईंलाई यसरी हेर्नुहोस्, सबै प्रिय लाग्नेछन् तपाईंलाई – Nepalistudio
यसरी हेर्नुहोस्, सबै प्रिय लाग्नेछन् तपाईंलाई
‘यदि तपाईं अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धबाट केही पाउनुपर्ने आवश्यक्तालाई हटाउनुहुन्छ, यदि तपाईं आनन्दले स्वतः भरिपूर्ण बन्नुहुन्छ भने, तपाईं सबैथरी मानिसहरुसँग अद्भूत सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ ।’ – सद्गुरु ।
हामी अरुसँग रिसाइरहेका हुन्छौं, ठुस्किरहेका हुन्छौं । अरुलाई हामी नराम्रो देखिरहेका हुन्छौं । हामीभित्र बैरभाव जाग्छ । रिस एवं इष्र्या पलाउँछ । यो सत्रु, त्यो सत्रु । किन ?
जन्मदा सबै प्रिय
जन्मदा हाम्रा कोही सत्रु थिएनन् । कोही बैरी थिएनन् । हाम्रा लागि कोही घृणित थिएनन् । हाम्रा लागि कोही अपहेलित थिएनन् । हामी जन्मदा सबै आफ्ना थिए । सबै पि्रय थिए ।
हिजो हामी सबैका थिएनौं । तर, हाम्रा सबै थिए । हाम्रो आँखाले देख्ने सबै आफ्नै थिए । पि्रय थिए । सुन्दर थिए । कालो, गोरो । गरिब, धनी । कुरुप, सुन्दर । सबैलाई हामी उस्तै देख्थ्यौं । आफ्नै ठान्थ्यौं ।
जति हुर्कियौं, बढ्यो बैरभाव
जति-जति हुर्कदै गयौं, हामीले पराई र आफन्त छुट्याउन थाल्यौ । मित्र र सत्रु देख्न थाल्यौ । हिजो सबै उस्तै थिए । आज फरक-फरक देख्न थाल्यौ । हामीले बाँच्ने संसारमा सत्रुहरु थपिए । अर्थात यी सत्रु एव सत्रुता हामीले पैदा गर्‍यौं ।
यसको कारण हामी नै थियौं । हाम्रै कारणले मान्छेहरु हाम्रा सत्रु भए । बैरी भए । पराई भए । किन ?
किनभने जीवन जिउने क्रममा हामीले अरुबाट अपेक्षा गर्न थाल्यौ । हाम्रो आवश्यक्ता र स्वार्थहरु अरुबाट परिपूर्ति गराउने चेष्टा गर्‍यौं । हाम्रो खुसी र आनन्दहरु अरुबाट प्राप्त गर्ने मनासय राख्यौं । हामीले जे गर्‍यौं, अरुले पनि त्यही गरे । उनीहरुले पनि हामीबाट अपेक्षा राखे । उनको सर्त र स्वार्थभित्र हामीलाई बाँध्ने कोसिस गरे । स्वार्थ र अपेक्षाको यही तानातानमा हामीले कसैलाई साथी बनायौं, कसैलाई बैरी ।
अतः त्यही सत्रुता पालेर एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्यौ । एकअर्कालाई ‘देखाउने’ खेलमा लाग्यौ । यसरी अरुसँग भनाभन, लडाई, झगडा गरेर हामीले आफु बाँच्ने संसार साँघुरो र धरापमा पार्दै गयौं ।
आज हामीलाई अरुको प्रगतिले दुःखी तुल्याउँछ । आज हामीलाई अरुको खुसीले बेचैन बनाउँछ ।
खुलस्त बोल्न सक्दैनौ । खुलस्त हिँड्न सक्दैनौ । असुरक्षाको भावले घेरा हालेको छ । कसैले केही भन्ने हो कि, केही गर्ने हो कि ? हामी भयाभित हुन्छौ ।
अब आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस् त, ति भय कहाँबाट पैदा भयो ? तपाईं आफैबाट । तपाईंको सोंच र व्यवहारबाट । यर्थाथलाई बोध गर्नुहोस्, तपाईंका कोही सत्रु छैनन् । कोही बैरी छैनन् । तपाईंलाई कतैबाट असुरक्षा छैन । त्यो त केवल तपाईंको भावनात्मक अवस्था मात्र हो । तपाईंले कसैलाई सत्रु ठान्नुहुन्छ भने त्यो तपाईंको मनभित्रको अवस्था हो । मनबाट त्यो भाव हटाउनुहोस्, सत्रु पनि मित्र लाग्नेछ ।
यदि कोही तपाईंको सत्रु हुन्छन् भने त्यसलाई अरुले किन देख्दैन ? एक अपरिचित व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्नुहोस्, ‘मेरा सत्रु को को हुन् ?’ उनले कदापी भन्न सक्नैछैन । उनले छुट्याउन सक्नेछैन । संसारमा सात अर्ब मान्छे छन्, त्यसमध्ये तपाईंको सत्रु को ? कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने उनले कोही सत्रु देख्नेछैन । किनभने त्यो सत्रु तपाईंको मनभित्र मात्र छ । तपाईंको दृष्टिकोण र धारणमा मात्र अरु खराब अनि सत्रु छन् ।
संसारलाई यसरी हेरौं
तपाईं एक्लै जन्मनुभयो । जन्मदा तपाईंसँग केही थिएन । वा तपाईंले नग्न शरीरबाहेक केही लिएर आउनुभएकै थिएन । भोलि तपाईको मृत्यु हुनेछ । त्यसबेला पनि तपाईंलाई सर्बाङ्ग बनाएर घाटमा लगिनेछ । तपाईंको स्वमित्वमा, तपाईंको हातमा केही दिइनेछैन । बरु, तपाईंले आर्जन गरेको कुरा पनि अरुको स्वमित्वमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
एक्लै बाँच्नुछ । मरेर केही लानु छैन । त्यसो भए अरुबाट किन अनावश्यक अपेक्षा गर्ने ? किन अरुबाट आफ्नो आवश्यक्ता परिपूर्ति गराउने चाह राख्ने ?
जब तपाई कसैप्रति अपेक्षा राख्नुहुन्न, कसैको व्यवहारले तपाईंलाई दुःखी बनाउँदैन । जब तपाईं कसैप्रति आशा राख्नुहुन्न, कसैको धनदौलत, बैभवले तपाईंलाई लोभ्याउनेछैन । आफ्नो आवश्यक्ता, आकंक्षा र स्वार्थ अरुबाट परिपूर्ति गर्ने चाहना त्याग्नुहोस्, सबै आफ्ना लाग्नेछ । सबै पि्रय लाग्नेछ ।